Global Voices teny Malagasy » Fanaovan’ny Gazety Sri Lankey Ireo Vehivavy Ho Toy Ny Entana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 15 Mey 2017 11:43 GMT 1	 · Mpanoratra GroundViews Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Azia Atsimo, Sri Lanka, Fampandrosoana, Fitantanam-pitondrana, Hafanàm-po nomerika, Lalàna, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika, Vaovao Tsara, Zon'olombelona
Vehivavy miandry fiara mpitatitra iombonana – Anuradhapura – Sri Lanka. Sary avy tao amin'ny Flickr-n'i Adam Jones. CC BY 2.0
Tao amin'ny Groundviews, tranonkala iray fanaovan-gazetin'olontsotra efa nahazo loka tao Sri Lanka, ity lahatsoratra avy tamin'i Deepanjalie Abeywardana  ity no nivoaka voalohany. Ny dika nalefa eto ambany dia navoaka ho ampahany amin'ny fifanarahana fifampizaràna votoaty amin'ny Global Voices.
Mitohy mivily làlana miala amin'ny fenitry ny etikan'ny fanaovana gazety ny media ao Sri Lanka. Hita anatin'io ireo kisarisary mibaribary, ireo sary sy fanehoankevitra mamitaka momba ireo zava-mitranga, fametahana marika ny foko niaviana, natao tamin'ny fomba manavaka tsara ireo vondrom-poko, ireo hadisoana manoloana ny zavatra misy ary ny fandàvana ny “zo hamaly” amin'ny fitaterambaovao. Noho izany, nanitsakitsaka fenitra marobe tamin'ny etika (fitsipi-pitindrantena) ny fanehoana ireo vehivavy tany anatin'ireo haino aman-jery Sri Lankey nandritry ny taona maro, ka niafara tamin'ny fanamafisana ireo fitsaratsaram-poana ratsy natao azy ireo. Mety hisy fiantraikany avy hatrany amin'ny fomba fijery ireo vehivavy eny anatin'ny fiarahamonina io fitsaratsaram-poana io.
Anatin'io trangan-javatra io dia manome fanamarihana maromaro momba ny fanehoana ireo vehivavy any anatin'ireo gazety amin'ny fiteny Sinhala  ity lahatsoratra ity, nifototra tamin'ny angon-drakitra avy ao amin'ny Ethics Eye  — sehatra iray ao amin'ny Facebook, izay manaraka maso sy mametaka marika amin'ireo fanitsakitsahana ireo etikan'ny haino aman-jery any anatin'ireo gazety an-tsoratra fito Sinhala — ny Dinamina , ny Divaina , ny Lankadeepa , ny Mawbima , Sunday Divaina, Sunday Lankadeepa ary ny Sunday Mawbima.
Ny fanaovana ireo vehivavy ho toy ny entana ilain'ny filàn'ny nofo
Manitsakitsaka io etika taridalana io ny sasany amin'ireo gazety an-tsoratra nentim-paharazana Sinhala ao Sri Lanka, amin'ny fanehoana ireo vehivavy ho toy ny entana ilain'ny filan'ny nofo. Any anaty gazety, matetika atao toy ny entana ireo vehivavy , amin'ny fampiasàna ireo teny tsy loa-body na sary mihantsy filàna. Ireny teny tsy loa-body ireny matetika dia ireo izay mampiseho sary mitafy tapaka, izay tsy misy idirany amin'izay voalazan'ilay lahatsoratra. Ohatra, tao amin'ny iray amin'ireo lahatsorany dia notondroin'ny gazety an-tsoratra iray Sinhala ho “baduwa” (zavatra) ny vehivavy iray, amin'ny filazana ankolaka fa fitaovana ho an'ny filàn'ny nofo ireo vehivavy. Nolazain'io gazety io ihany koa fa ireo mpilalao an-tsehatra rehetra ao Sri Lanka dia tafiditra ao anatin'ilay “asa ela indrindra teto an-tany”, manao azy rehetra ho mpiasa mpivarotena.
Ankoatra izany, nisy andian-dahatsoratra maro nivoaka tamin'ny iray amin'ireo gazety an-tsoratra nentim-paharazana Sinhala nisy sarinà  vehivavy avy any ivelany manao “bikinis”, izay tsy nisy nifandraisany mihitsy tamin'ilay tantara notaterin-dry zareo. Tsy nahitàna fanambaràna mihitsy tamin'ireo andian-dahatsoratra hilazàna hoe sary nalaina amin'ny fakàntsary mahatakatra lavitra ireo ary tsy nakàna ny faneken'ireo azo sary. Araka ny voalaza ao amin'ny Kaodin'ny Fomba Fiasa Matianina navoakan'ny Fiombonamben'ireo Mpanonta lahatsoratra ao Sri Lanka , dia tsy azo ekena ny fampiasàna fitaovana fakàna sary mahatakatra lavitra mba hakàna sary olona tsy nahazoana fahazoandàlana avy aminy, any anaty tanànany manokana na iraisan'ny daholobe, izay misy fiandrandràna fiainana manokana azo ekena araka ny tokony ho izy– raha tsy hoe ho tombotsoam-bahoaka.
Avy tamin'ny Ethics Eye
Mandritra izany fotoana izany, io gazety izay nanondro ireo vehivavy mpilalao an-tsehatra rehetra ho mpivarotena io ihany koa, tao anatinà lahatsoratra iray hafa, no nanohana ny maha-toy ny “mpitahiry ny soatoavina ara-kolontsaina sy ara-pitondrantena” ireo vehivavy. Nitsikera ny filazana ofisialy nataon'ny Ministry ny Fampianarana io fanehoankevitra io, filazàna mandrara ny fanerena ny fomba fiakanjon'ireo vehivavy miditra any amin'ireo sekolim-panjakana sy tsy miankina.
Ampiasaina any anaty gazety ireo teny manambany toy ny “manja”, indrindra rehefa entina hilazàna ireo tratran'ny fanolanana sy ireo sisam-paty. Lazaina any anatin'ireo lahatsoratry ny gazety maro amin'ny fiteny Sinhala ny endrika ivelan'ireo vehivavy niharan'ny fanolanana sy sisam-paty tamin'izany, na avy aminà loza na tranga hafa. Mahazatra ny mahita matetika any anatin'ireo gazety amin'ny fiteny Sinhala ny fitaterana antsipirihan-javatra tsy misy ifandraisany, tsy misy ilàna azy (toy ny endrika ivelany), rehefa tsy misy ifandraisany mivantana akory amin'ilay tantara. Ohatra, fony nisy tovovavy roa mpianatra maty noho ny lozam-piarandalamby  tany Dehiwela tamin'ny taona lasa, enina tamin'ireo gazety fito amin'ny fiteny Sinhala no niteny momba ny endrika ivelan'izy ireo rehefa nanao tatitra momba ilay tranga.
Avy amin'ny Ethics Eye
Ny fampiasàna fomba fiteny tahaka ireny, izay sady tsy misy ifandraisany no manavakavaka, dia mahatonga fanontaniana goavana momba ny hoe hatraiza ny fanatanterahan'ny haino aman-jery ao Sri Lanka ny andraikitr'izy ireo manoloana ny fitsipi-pitondrantena.
Manamafy ny fitsaratsaram-poana ny vehivavy ny fanaovana azy ireny ho toy ny entana any anaty gazety. Ambonin'izay, ny fanaovana azy ho toy ny fitaovana ara-nofo sy ireo fanehoana manimba azy ireo atao any anaty gazety dia mitondra mankany amin'ny fanamaivanana ny herisetra atao amin'ny vehivavy. Vao haingana ny “The Guardian” no nahita hoe ny fanaovana ny vehivavy sy ny ankizivavy ho toy ny entana sy fitaovana ho an'ny filàn'ny nofo any anaty haino aman-jery dia mifandrohy amin'ny fomba fitondrantena mpanavakavaka ny lahy sy ny vavy ao anaty fiarahamonina ary ny fanekena ireo ideolojian'ny lehilahy manao ny vehivavy ho toy ny entana .
Ampiasaina ho fanaitairana ny herisetra manjo ny vehivavy
Rehefa mandray ireo olana sosialy misy endrika manafintohina manokana na mahavaky fo — toy ny herisetra na fidorohana zavamahadomelina — ny Kaodin'ny Fomba Fanao Matianina dia milaza fa tokony hitandrina fatratra ny gazety rehefa mampiseho ny zavamisy, ny fomba fijeriny, ny sary ary ny kisary, miaraka amin'ny fahaizana mandanjalanja sy fahaizana manaja, mifanaraka amin'ny andraikiny hamoaka izany mba ho tombontsoan'ny rehetra. Kanefa, manitsakitsaka io torolàlana io ny sasany amin'ireo gazety Sinhala, amin'ny fanaovana vaovao manaitaitra sy toy ny tantara foronina rehefa mitatitra ireo tranganà herisetra manjo ny vehivavy, toy ny fanolànana na fanararaotana ara-nofo. Ohatra, ny gazety sasany manondro ireo nahavanon-doza na ireo ahiahiana ho mpanatanteraka heloka ara-nofo ho “Cupidons”, fomba fiteny iray manasohaso azy ireny. Mandritra izay fotoana izay ihany, mazàna ireo niharam-boina sy sisam-paty taminà fanolànana no tsiniany noho ny fitafy nanaovan'izy ireny, na noho izy ireny tany amin'ny toerana tsy tokony halehany tamin'ny fotoana nampiditra angano.
Rehefa raisin'ny gazety ho tomponandraikitra tamin'ny fanolànana azy ny vehivavy, tsy hoe fotsiny miantraika amin'ny fomba fijerin'ny fiarahamonina ny vehivavy izany, fa koa mampiroborobo ny tsimatimanota sitrahan'ireo mpanao herisetra amin'ny vehivavy.
Anatin'ny ezak'izy ireo hamadika ny tantara iray ho mampientanentana sy manaitaitra mba hahatonga izany hisarika kokoa ny mpamaky, ataon'ny gazety tsinontsinona ny anjara toerana lehibe tazonin'izy ireo amin'ny fanefena fahatsiarovantena momba ny herisetra ara-nofo. Resaka mamoafady eny anaty fiarahamonina, ary lasa tsy ambarambara ny tranga maro, raha fanolànana, herisetra an-tokantrano ary ireo endrika maro hafan'ny herisetra no atao resaka. Ny fanaovana ireny tranga ireny ho zavatra manaitaitra any anaty fanadihadiana maro any dia mitondra ny saina hiala lavitra an'ireo votoatiny tena zavadehibe, toy ny fisorohana sy ny fampihenàna ny heloka tahàka ireny. Tafiditra amin'izany ny fampahafantarana momba ireo laharana azo antsoin'ireo niharan'ny fanararaotana ara-nofo, hatramin'ny fisian'ireo fikambanana misahana manokana ny fanampiana ireo vehivavy niharan'ny herisetra ara-nofo.
Inona no azo atao?
Ny dingana voalohany hitsaboana io olana io dia ny famoronana fanentanana momba ny fanitsakitsahana ny fitsipi-pitondrantena vitan'ireo gazety rehefa manao tatitra momba ny vehivavy. Tamin'ny Andro Erantany ho an'ny Vehivavy – 2017, ny Ethics Eye dia namoaka lahatsary iray  nanasongadinany ny sasantsasany amin'ireo andalan'ny fitsipi-pitondrantena nohitsakitsahan'ireo gazety Sinhala momba io raharaha io. Ankoatra an'io, ny fitarihana adihevitra manodidina ny fanitsakitsahana fitsipi-pitondrantena any anatin'ireo haino aman-jery sy ny fanelezana fanentanana manodidina azy ireo dia hanome ho an'ny daholobe ireo torohay ilainy mba hitakiana valinteny amin'ireo mpanao gazety sy ireo toniandahatsoratra momba ireo hadisoana vitan'izy ireny, ary ny fahavoazana nateraky ny tatitra manafintohina navoaka. Ambonin'izany, dia ilaina maika ao Sri Lanka ny fanofanana ireo mpanao gazety momba ny fitsipi-pitondrantena — tafiditra amin'izany ny fanaovana tatitra momba ny vehivavy, amin'ny fomba tsy manavakavaka sy manao azy ho toy ny fanaitairana filàna.
Deepanjalie Abeywardana no Lohan'ireo Sampandraharaha FikarohamBaovao ao amin'ny Verité Research, ary koa mifandray amin'ny Ethics Eye , ilay mpanaramaso tsy miankina ny haino aman-jery.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/05/15/99453/
 Deepanjalie Abeywardana: http://groundviews.org/2017/05/03/the-objectification-of-women-in-the-sinhala-press/
 fiteny Sinhala: https://en.wikipedia.org/wiki/Sinhalese_language
 Ethics Eye: https://www.facebook.com/Ethics-Eye-228455347509530/
 ny Dinamina: http://www.dinamina.lk/
 ny Divaina: http://www.divaina.com/
 ny Lankadeepa: http://www.lankadeepa.lk/
 ny Mawbima: http://www.mawbima.lk/
 Any anaty gazety, matetika atao toy ny entana ireo vehivavy: https://roar.lk/features/poll-media-ethics-sri-lanka/
 Kaodin'ny Fomba Fiasa Matianina navoakan'ny Fiombonamben'ireo Mpanonta lahatsoratra ao Sri Lanka: https://accountablejournalism.org/ethics-codes/code-of-ethics-sri-lanka
 maty noho ny lozam-piarandalamby: http://www.dailymirror.lk/108645/Two-girls-knocked-down-by-train-in-Dehiwala
 ideolojian'ny lehilahy manao ny vehivavy ho toy ny entana: http://image.guardian.co.uk/sys-files/Guardian/documents/2009/05/29/joiningupthedots.pdf
 dia namoaka lahatsary iray: https://www.facebook.com/pg/Ethics-Eye-228455347509530/videos/?ref=page_internal